‘निशानको लागि टेरानो गेम चेन्जर... :: कमल नेपाल :: Setopati
नेपालका लागि निशान गाडीको आधिकारीक बिक्रेता पायोनियर मोटोकर्पले केही दिन अगाडि मात्र ‘न्यू टेरानो’ एसयुभी सार्वजनिक गर्यो।नेपालमा भित्रनु भन्दा पहिले नै राम्रो चर्चा पाएको टेरानोले भारतीय बजारमा पनि राम्रो प्रतिकृया पाइरहेकोको कम्पनीले जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा पायोनियर मोटोकर्पका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर ज्ञानेन्द्र चन्दसँग सेतोपाटीका सुधिर भण्डारीलेगरेको संक्षिप्त कुराकानीः
भर्खरै मात्र नेपालमा सार्वजनिक ‘न्यु टेरानो’को प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ?
सोधपुछ गर्न आउनेहरु हाम्रो अपेक्षा भन्दा धेरै छन्। उपत्यकामा मात्रै अहिलेसम्म १५ सय भन्दा धेरै त रेकर्डेड सोधपुछ मात्र छ। कुनै पनि गाडीको लागि यति छोटो समयमा सोधपुछ हुनु निकै राम्रो हो।
प्रतिक्रियाको कुरा गर्दा सबैले निकै मन पराउनु भएको छ। यो सेगमेन्टमा निशान ब्राण्डको गाडी यती सस्तोमा पाउँदा ग्राहकहरु खुसी हुनुहुन्छ र हामीले कुनैपनि ‘नेगेटिभ’ पाएका छैनौँ। त्यस्तै निशानले यती ‘अर्फोटेवल प्राइस’मा राम्रो गाडी ल्यायो भनेर सबै ग्राहक एकदमै खुशी हुनुहुन्छ।
यसको मूल्य कम हो भन्न मिल्छ ?
हो, हामीले एकदमै कम मार्जिनमा काम गरिरहेका छौँ। सुरुवाती चरणमा कम्प्याक्ट एसयुभी सेग्मेन्टको मार्केट अलि ठूलो पनि छ। यो सेग्मेन्टमा हाम्रो इन्ट्री निशानको सेल्समा ब्रेक थ्रु र गेम चेन्जर नै हुन्छ। त्यसैले हामीले अरु कम्पिटिटर भन्दा अफोर्टेवल प्राइसमा लन्च गरेका हौँ।
टेरानोको मुख्य विशेषता के के छन् ?
टेरानो पेट्रोल र डिजेल गरी दुई वटा भेरियन्टमा उपलब्ध छ। पेट्रोलमा ४२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा ‘फुल अप्सन’ दिएका छौँ। जसमा एयर ब्याग, एबिएस, इबिडी, अलोए ह्विल, पावर स्टेयरिङ, पावर विन्डो, एसी लागायतका धेरै फिचर्स छन्।
त्यस्तै अरु विशेषता भनेको २ सय ५ एमएमको ग्राउण्ड क्लियरेन्स छ, जुन यो सेग्मेन्टमा बेष्ट हो। यसको स्पेश ठूलो छ। ४ सय ७५ लिटरको बुट स्पेश छ। आकर्षक इन्टेरियर लगायतका धेरै विशेषता छन्।
नेपालमा अरु ब्राण्डका एसयुभीहरुले पनि राम्रो बजार लिइरहेका छन्, टेरानोलाई त्यो बजारमा छिर्न सजिलो होला र ?
हो, यो सेग्मेन्टमा सबै प्रतिस्पर्धी ब्राण्डले राम्रै गरिरहेका छन्। त्यस्तै २० देखि २५ प्रतिशत मार्केट सेयर एसयुभी सेगमेन्टले गरेको छ। टेरानोको क्वालिटी र मूल्य दुवै राम्रो छ र निशान विश्व बजारमा निकै ख्याती कमाएको ब्राण्ड हो। त्यसैले हामी सजिलै मार्केटमा प्रवेश गर्छौँ र यो सेगमेन्टमा बेस्ट सेलिङ ब्राण्ड बन्छौँ।
एक बर्षमा कति बेच्ने लक्ष छ ?
ग्राहकहरु निकै सन्तुष्ट, खुसी र उत्साहित हुनुहुन्छ। अहिलेको रेस्पोन्स हेर्दा एक वर्षमा १ हजार गाडी सजिलै बेच्छौँ भन्ने अनुमान गरेका छौ।
अहिले टेरानो खरिद गर्नेलाई केही सुविधा ल्याउनु भएको छ ?
हामीले एकदमै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा यसलाई लन्च गरेपनि यसमा अझै पनि १ लाख ५० हजारसम्म क्यास डिस्काउन्ट दिइरहेका छौ। अहिले खरिद गर्ने जो कोहीले लन्च भएको मूल्यमा डेढ लाख नगद छुट पाउनुहुनेछ।
निशान मोटर्सले कारमा एक वर्ष अथवा २० हजार किलोमिटरको वारेन्टी उपलब्ध गराउँछ तर ग्राहकले लगानी गरेको चिजमा हामी अझ धेरै उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर वारेन्टी २ वर्ष वा ३० हजार किलोमिटरको उपलब्ध गराएका छौँ।
अन्तिममा, एसयुभी किन्ने सोचमा रहेकालाई केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
एसयुभी किन्ने सोचमा रहेका ग्राहकहरुलाई राम्रो प्राइसमा, राम्रो ब्राण्डको, राम्रो गाडी नेपालमा आएको छ, एकपटक निशानको शोरुममा आएर गाडी टेष्ट ड्राइभ गर्नुहोस भन्न चाहान्छु।
तस्वीरः नारायण महर्जन
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ५, २०७४, ०३:२७:५३